Htar Ni Traditional Medicine - Aloe Vera Paste
Shwe War Phoo ALOE VERA PASTE
Help regulate bowel, urinary, haematological and nervous system, help regulate menstrual cycle and relief of menstrual disorder and symptoms of menopause, help detoxify the body and improve blood circulation, help relief muscle discomforts and ache, help relief sleeplessness, palpitation, fatigue and improve appetite.
ဤ ရွှေဝါဖူး အမှတ်တံဆိပ် ရှားစောင်းလက်ပပ်ချက်ဆေးကို သောက်သုံး ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများတွင်ဖြစ်တတ်သော မီးယပ်ရောဂါများ၊ ဓမ္မတာ လာစဉ် ကိုက်ခဲခြင်းနှင့် ဓမ္မတာမမှန်ခြင်း၊ အမျိုးသားများတွင် ဖြစ်တတ် သော ဒူလာရောဂါများနှင့် ဒူလာရောဂါကြောင့် ညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်း၊ သွေးသားမသန့်ရှင်း၍ ဖြစ်သောရောဂါများ၊ ဆီးဝမ်းသွေးလေချုပ်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ နှလုံးတုန်ရင်တုန်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်းတို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်။
Product Name : Shwe War Phoo Aloe Vera Paste
Dosage Form : Paste Form (Bottle)
Traditional Medicine Registration Number : TMR 011717
Indication : Help regulate bowel, urinary, haematological and nervous system, help regulate menstrual cycle and relief of menstrual disorder and symptoms of menopause, help detoxify the body and improve blood circulation, help relief muscle discomforts and ache, help relief sleeplessness, palpitation, fatigue and improve appetite.
Dosage : Adult -2teaspoon (10 grams) per time, Children - 1 teaspoon (5 grams) per time, 1 time daily, take at early morning or bedtime with cold water.
တိုင်းရင်းဆေးဝါးအမည် - ရွှေဝါဖူး အမှတ်တံဆိပ် ရှားစောင်းလက်ပပ်ချက်ဆေး
ဆေးဝါးပုံစံ - ချက်ဆေး (ဘူး)
တိုင်းရင်းဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR 011717
သုံးစွဲနိုင်သောရောဂါများ - အမျိုးသမီးများတွင်ဖြစ်တတ်သော မီးယပ်ရောဂါများ၊ ဓမ္မတာလာစဉ်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့် ဓမ္မတာမမှန်ခြင်း၊ အမျိုးသားများတွင်ဖြစ်တတ်သော ဒူလာရောဂါများနှင့် ဒူလာရောဂါကြောင့် ညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်း၊ သွေးသားမသန့်ရှင်း၍ဖြစ်သောရောဂါများ၊ ဆီးဝမ်းသွေးလေချုပ်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ နှလုံးတုန်ရင်တုန်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သုံးစွဲရန်ဆေးပမာဏ - တစ်ခါသောက် လူကြီး လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၂)ဇွန်း၊ ကလေး လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁)ဇွန်း မနက်စောစော(သို့ ) ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း ရေအေးဖြင့် သောက်ပါ။ နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ကျန်းမာစိုပြေ ဝဖြိုးစေနိုင်ပါသည်။
用法用量：成人 - 每次2茶匙（10克），儿童 - 每次1茶匙（5克），每天1次，在清晨或睡前服用温水服用。